कुलमान घिसिङको कार्यकाल अर्को महिना सकिँदै, दोहोर्‍याउला त फेरी ? - Ahakhabar
ahakhabar - आहा खबर १२ श्रावण २०७७, सोमबार १०:३५
कार्यकाल सम्हाल्दा ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेका प्राधिकरणलाई घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफामा लैजानुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित नोक्सानी रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा १५ अर्ब २२ करोडमा झार्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ३५ अर्ब ७ करोड आम्दानी रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६मा ७३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
कुलमानकै कार्यकालमा ढल्केबर २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मुजफरपुर ढल्केबरलाई २२० के.भी. मा चालु गरिएको छ । कटैया कुशाहा १३२ के।भी। दोश्रो सर्किट र रक्सौल परवानिपुर १३२ क.भी प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल र बिहारबीच विद्युत आदानप्रदानको क्षमता विस्तार भएको छ ।
तर उहाँको कार्यकाल अर्को महिना सकिनै लागेकोले विद्युत खपत बढाउने र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार आउँदो नेतृत्वले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने जिज्ञासा उठेका छन् । कार्यकाल सम्हालेको तेस्रो वर्षको अवसरमा गएको वर्षको भदौ २९ गते कार्यकारी घिसिङले आफ्नो भावी योजना निम्न रहेको बताउनुभएको थियो ।
प्राधिकरणको आन्तरिक प्रणाली र सेवा प्रवाहमा आधुनिक एवं नविनतम् सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी ‘डिजिटल एनईए’ बनाइने छ । इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ ९इआरपी० प्रणाली लागू गरिने छ । प्राधिकरण होल्डिङ संस्थाको रुपमा रहने गरी हरेक प्रदेशमा स्वायत्त प्रदेश विद्युत वितरण संस्था खोलिने छ ।
६३५ मेगावाटको दूधकोसी आयोजनाको पनि वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ । साथै उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ९८२५ मेगावाट०, चैनपुर सेती ९२१० मेगावाट० लगायत चिलिमे अन्तर्गत करिब ४२५ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाइने छ ।
२५ मेगावाटको ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।देशैभरका प्रसारण सबस्टेसनहरुलाई स्वचालित गरिनेछ । नेपाल र भारतबीचका विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु योजनाबद्ध रुपमा निर्माण गरिने छ । बुटवल(गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण मोडलको टुंगो लगाई निर्माण अगाडि बढाइने छ ।
न्यू बुटवल–अत्तरीया ९कन्चनपुरको दैजी० ४०० के।भी। लाइनको विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइने छ । अन्य ४०० के।भी। लाइनहरुको अध्ययन गरिने छ । नेपालको रातमाटे र चीनको केरुङसम्मको ४०० केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गरिने छ ।